🥇 ▷ Google Pay: Hadda sidoo kale waxaa heli kara macaamiisha ING Bank ✅
Google Pay: Hadda sidoo kale waxaa heli kara macaamiisha ING Bank
Macaamiisha ING waxay hadda ku ridi karaan kaararka amaahda Google Pay waxayna u isticmaali karaan adeegga lacag-bixinta Google si ay ugu bixiyaan dukaamada. Isticmaalayaasha iPhone wali waxay leeyihiin wax ay ku sugaan ING Apple Pay oo sug, laakiin way timaadaa.
Tan iyo shalay, macaamiisha ING Bank (horey u ahaan jiray ING-DiBa) waxay hadda u adeegsan karaan adeegga bixinta Google Pay si ay si fudud ugu bixiyaan dukaamada taleefannadooda gacanta iyo kaarka amaahda. In kabadan hal sano ka dib markii Adeegga Lacag bixinta Google laga bilaabay Jarmalka bishii Juun 2018 oo markii hore la taageeray bangiyada aad u yar, tirada bangiyada kaqeybqaadanaya ayaa si isdaba joog ah u kordhay bilihii la soo dhaafay. Hadda ING waa mid ka mid ah bangiyada ka dhigaya adeeg ku saleysan NFC inay u helaan macaamiisheeda.
Waan wadnaa Macaamiisheenna leh taleefannada casriga ah ee Android waxay hadda isticmaali karaan nidaamka lacag-bixinta mobilada @GooglePay isticmaal. #ING_DE
– ING Jarmalka (@ING_Germany) Ogast 21, 2019
Ka dib markii bangigu ku dhawaaqay toddobaadyo ka hor, oo ku xigta Apple Pay inuu bixiyo adeeggan lacag-bixinta, waxay ahayd shalay illaa maanta. Bogagga hore ee ING halkii ay ka ahaan lahayd tii hore ee “Dhawaan in la tago” durdurro hadda warqad ah “Google Pay waa jiraa”, oo ay raacaan tilmaamo ku saabsan dejinta adeegga taleefanka casriga ah ee Android ama saacadda smart.
U adeegso Google Pay at ING
Logo Google Pay | (c) Google
Shuruud u isticmaalista Google Pay waa app isla magaca aad ku leedahay Google Play Store Find. Telefoonkaaga casriga ahi waa inuu taageeraa NFC oo uu ku shaqeeyaa Android 5.0 ama ka sareeya. Ka dib markii aad rakibto app-ka, fur ka dibna sawir kaadhkaaga ING VISA Kaarka – talaabooyinka haray ayaa lagu muujiyey shaashada. Gudaha guduhu ma qaadanayo 5 daqiiqo. Ku darista kaarka deynta iyo adeegsiga Google Pay waa bilaash.
Si aad u bixiso, si fudud u hayso taleefankaaga casriga ah ee Android oo leh shaashad ku ag taal kaarka aqriyaha – diyaarna u ah diiwaanka lacagta. Xitaa maaha inay furto barnaamijka. Lacag bixinta in ka badan 25 euro waxaad ku xaqiijineysaa nabadgelyada faraha ama lambarka.
Kaarka Visa ee ING | (c) ING
Faahfaahinta kaarka deynta looma wareejinayo ganacsiga ama bixiyaha adeegga lacag bixinta marka bixinta la sameynayo. Taa bedelkeed, Google waxay u sameyneysaa furaha amniga astaan ​​u ah kaar walba wuxuuna ballan qaadayaa “xakameynta lacagahaaga iyo xogtaada“in la ilaaliyo.
Goorma ayey Apple Pay imaanaysaa ING?
Bilowga Apple Pay dariiqa ayaa wali ka maqan. Waxaa looga dhawaaqay ING “ee sanadka 2019”, taariikhda rasmiga ah ee la bilaabayo wali ma jiraan. Macluumaad badan ayaa ka soo baxdey iphone-ticker.de Bixintu waxay ku bixin kartaa ING.
Inbadan oo kusaabsan: Google Pay
Xigasho: ING Germany, Twitter ING
Ma u dhowaan doontaa inaad isticmaasho Google Pay?
Haa, isla markiiba waan soo degsaday barnaamijka
Waan xiiseynayaa, laakiin wali waxaan sugayaa warbixinnada adeegsadaha
Maya, bangigeygu ma taageerayo adeegga
Maya, Waxaan sii wadaa isticmaalka kaarka deynta
Maya, waxaan jeclaan lahaa inaan wax walba ku bixiyo lacag ahaan